ပင်မစာမျက်နှာ လယ် Sentimento - (v2) Valerio Scanu
Sentimento - Valerio Scanu ၏ Valerio Scanu အခမဲ့ MIDI ကာရာအိုကေ download, ( မှတ်ပုံတင်ခြင်းမသင်္ကေတပြ Up ကိုမကန့်သတ်ဒေါင်းလုပ် miditeca.me အဘယ်သူမျှမ). Miditeca.me 70.000 MIDI ကာရာအိုကေကျော် MIDI ကာရာအိုကေများအတွက်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးအခမဲ့ site ကို
တခြားစာအုပ်တွေရှာဖွေနေခြင်းဖြင့် Valerio Scanuအဆိုပါအနုပညာရှင်ရဲ့စာမျက်နှာသို့သွားရောက်လည်ပတ် Valerio Scanu ၏အခြား MIDI ကာရာအိုကေများအတွက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ (အဆိုပါပြတင်းပေါက်အခြားစာမျက်နှာဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်)
ဤတွင်ဖြစ်ပါသည် သီချင်းစာသား (ကာရာအိုကေ) သငျသညျကို download လုပ်ချင်သောသီချင်း, Sentimento ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လင့်ခ် - Valerio Scanu ၏ Valerio Scanu စာမျက်နှာအဆုံးမှာတွေ့နိုင်ပါသည်
သီချင်းစာသား Sentimento - Valerio Scanu ၏ Valerio Scanu
ziu jaco အားဖြင့်
မိုင် taglia နဲလ် petto အထင်ကရနေရာများ VA
dritto အယ်လ် cuore
lacrime ဈအတွက် affondano
ကိုယ့် miei pensieri
E Fort il bisogno che ho
di Amar te
l'Amore che io ti darò
alto del manto အတွက်più
copre il တစ်ဦးတည်းသော
အီး ti raggiungerò
del tuo အီး del mio
che stretti တစ်ငါ့ကိုterrò
အထင်ကရနေရာများ ti racconterò
စာရဲ semper နှုန်းcosì
il fuoco che မိုင် FA bruciare
ငါ့ကိုနှုန်း la ထုတ်ချေး che accende SEI
သည် L'Amore che io ti darò
ကိုယ့်ကြောင့် corpi nostri
အယ်လ် ritmo di un unico cuore
အီး ti raggiungeròအီးsarò
နဲလ်ကစ်နီဗင်တို che FA incontrare
che stretti တစ် ME terrò
အယ်လ် silenzio di candele
Dell notti နှုန်း
Ahhhh l'Amore che ci FA
Valerio Scanu - SENTIMENTO - Jaco.mid အားဖြင့် (ကာရာအိုကေ) လယ်
Sentimento - Valerio Scanu ဖိုင် extension ကိုနှစ်လယ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Valerio Scanu အပေါငျးတို့သအနုပညာရှင်ရဲ့ဖိုင်များကိုကြည့်ရှုပါ
ယခင်ဆောင်းပါးဘောလုံးပြိုင်ပွဲရဲ့လာမူလစာမျက်နှာ - Hermes အိမ် Band
next ကိုဆောင်းပါးnon C'èPiù - Valerio Scanu
13 နိုဝင်ဘာလ 2019
Into the great wide open – tom petty athe heartbreakers free...
When you and i were young maggie – barry taylor free...
Amandaelibera – Albano free midi karaoke
Mariadele – Tvb (Ti Voglio Bene)
7 မတ်လ 2019
I’m So Excited – (v2) The Pointer Sisters
Pproposta – (v2) Giganti free midi karaoke
Un’avventura – (Remix) (v2) Lucio Battisti
Ain t misbehavin – fats waller free midi karaoke
Tu peux partir – La Chicane free midi karaoke
Dangerous And Moving(2005) – Tatu
Me quebraste la vida – Los Iracundos free midi karaoke
Medley Cliff Richard – Cliff Richard free midi karaoke
Pocahontas Dopo Il Fiume Cosa C’e’ – Cartoni Animati free midi...
That sunday that summer – nat king cole free midi karaoke
Tout Au Bout De Nos Peines – Johnny Hallyday & Isabelle...